Iyo yemhando yepamusoro yekubatanidza inoshandiswa mune zvekurima kunyorera kuve nechokwadi chekuyerera kwemvura kubva paPI main pipe kune yakatetepa-inemadziro driplines. Kuisa chisimbiso rabha kunodiwa kuti ubatanidzwe nepombi huru. Kubatana neiyo dripline kunoitwa nenati. Nekuda kwekubatana kwevhavhavha, kuyerera kwemvura kunogona kudzimwa kana kugadziridzwa kune iyo yaunoda huwandu.
Ruvara: Dema / Bhuruu
Saizi: 16mm / 20mm
16mm / 20mm Donhwe tepi vharafu
Kudonha tepi mavharuvhu ari kubatanidza zvinhu zvinoshandiswa mumadiridziro masisitimu kana uchiisa matete-akavakirirwa matepi ekudonha.
Ivo anoshandiswa kubatanidza iyo yekudonha tepi kune iyo PE pombi iyo inopa iyo munda nemvura.
Zvinobatanidza nehupamhi hwemamirimita gumi nematanhatu akakodzera kubatanidza matipi anodonhedza nehurefu hwemamita anosvika mazana maviri emamirimita, uye vharafu inobvumira kudzima kwakasimba kwechikamu pasina kudzima kwese kudiridza.
Izvo zvinhu izvo zvavanogadzirwa nazvo zvinopesana nekutonhora kwakanyanya uye UV radiation.
Izvi zvinobatanidza zvakakosha mukuvakwa kwemaitiro ekudiridza nekushandisa matepi ekudonha.
Maumbirwo avo akaenzana uye anoenderana mamwe matete-akapoteredzwa emadziro ematepi pamusika.
Sarudzo hombe yezvinhu izvi inobvumira kushandiswa kwavo mukubatanidza kwakasiyana masisitimu (nepombi, ine tambo, imwe tepi).
Pashure: Brass kamwene kukanganisa sprinkler
Zvadaro: Irrigation Kukodzera- Bindu Series 17MM (POM)
Kudiridza Mini Valve
Mini Valve Yakavezwa
Mini Valve Yakavezwa Tepi
Mini Valve Ye Layflat
Mini Valve YePe
Mini Valve Inotorwa Nayo Gasket
Kudiridza mini vharuvhu- Shumba
Irrigation Kukodzera- Bindu Series 17MM (POM)